Madaxweyne Erdoğan: 'Si Aan Ugu Baahno Waxaan Gaadhsiin Doonnaa Gawaarida Maxalliga Ah Adeegga Umaddeena' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMadaxweyne Erdoğan: Yer Waxaan xaqiiqdii u soo bandhigi doonnaa gaariga maxalliga ah adeegga umadayaga '
16 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
madaxweynaha erdogan baabuurka guryuhu wuxuu runtii ku deeqi doonaa adeegga umadayada
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sanadkii 2019 shir ku qabtay Beştepe Millet Congress iyo Culture Center. Turkey ee noocooda ugu horeysay gaari gudaha iyo qaranka reer Maxlii qaranka ay xusay in Madaxweyne Erdogan ku bixiyeen, "Hawlgalkani waxa si dhow si ay u ilaaliyaan iyo taageero in la raaco, waxaan ku siin doonaa Turkey gaariga si waadaxa ah ee adeegga qarankeena." Waxa uu sheegay.
XUBINNADA CABIN EE JOOJINTA
Intii lagu jiray khudbadda Madaxweyne Erdogan, Madaxweyne kuxigeenka Fuat Oktay iyo xubno ka tirsan Golaha Xukuumadda Madaxweynaha ayaa masraxa qaatay. Barnaamijka, Gudoomiyaha kuxigeenka AK Party Numan Kurtulmuş, gudoomiye ku xigeenka AK Party, xubnaha guddiga latalinta sare ee madaxweynaha ayaa iyaguna kasoo qeybgalay.
LAGU XIRAY 16 MUDDO
Khudbaddiisii ​​uu ka jeediyay Shirka Qiimeynta Değerlendirme 2019 ee Cumhurbaşkanı, Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri; Waxbarashada, Caafimaadka, Caddaaladda, Amniga, Gaadiidka, Deegaanka iyo Magaalooyinka, Tamarta, Beeraha iyo Dhirta, Qoyska, Shaqada iyo Siyaasadaha Bulshada, Dhallinta iyo Ciyaaraha, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Dhaqaalaha, Ganacsiga, Warshadaha, Warshadaha Difaaca iyo Siyaasadda Dibadda. Waxay helay.
Wuxuu yiri arrimaha soo socda ee ku saabsan kartida iyo mas'uuliyadda Wasaaradda Wershadaha iyo Tiknolojiyadda:
Bishii Sebtember ee sanadkii hore, anagoo la wadaagno Istaraatiijiyadda Warshadaha iyo Teknolojiyada 2023 dadweynaha, waxaan dardargelinay 'Dhaqdhaqaaqa Teknolojiyadda Qaranka'. kaas oo noqon doona wax soo saarka mass ugu horeysay Turkey ee 2022. Waxaan bixinaa noocooda baabuurta maxaliga ah iyo kuwa wadaniga ah ikhtiyaar u ah ummadda maalmaha ugu dambeeya ee 2019.
Turkey, waxaan u jiraan hal talaabo inay noqoto dhab riyo 60-sano. Tusaalooyinka la soo bandhigay waxaa ka mahad celiyay qarankeena iyo waaxdeena marka loo eego qaabeynta iyo astaamaha farsamada labadaba. Waxaan rajeynayaa in habkan wadi doontaa in ay si dhow ula raac iyo taageero gaari Turkiga si ay hawsha aan bixino quruunteenna xoog leh.
WAXAAN KU FARAXEYNAA APRIL
Waxaan bilownay Barnaamijka Farsameynta Waxsoosaarka Ku-saleysan teknolojiyada si loo ogaado halka loo yaqaan alaabada qiimaha sare ku jirta. Bisha Abriil, waxaan ku dhawaaqnaa kuwa mudan in laga taageero qeybta mashiinnada. Sannadkii hore, waxaan abaabulay 135,9 5 shahaadooyin dhiirigelin ah oo loogu talagalay 691 bilyan oo maalgashi TL ah. Thanks to dhiirigalinta maalgashiga, waxaan abuuri doonaa in kabadan 212 kun oo shaqo oo dheeraad ah.
Sanadkii 2019, waxaan siinay 2,3 bilyan oo TL taageero ah SMEskeena, oo ah laf dhabarta dhaqaalaheena, iyadoo loo sii marayo KOSGEB. Iyada oo loo sii marayo hay'adaha horumarinta iyo maamulayaasha horumarinta, waxaan ku wareejinay 2 bilyan 87 milyan oo gini illaa 1 kun 49 mashruuc sanadkii hore. 36,5-da mashruuc, ee aan ku soo darnay baaxadda Taageerada Ku Saleysan Mashruuca oo qaddarkooda maal-gashiga ay gaarayaan 7 bilyan oo TL, waxay bixin doonaan in kabadan 7 kun oo shaqo oo dheeraad ah oo la bixin doono iyo tabarucyo waaweyn oo lagu yareynayo hoos u dhaca hadda jira.
DAQIIQADII 62 AAD KOOBAN FARSAMADA SHAQADA
17kii sano ee la soo dhaafay, waxaan kordhinay tirada aagagga warshadaha abaabulan oo gaaraya 122 iyada oo 315 lagu daro, 42 kun oo lagu daray 53 kun oo lagu daray iyo 1,5 milyan oo lagu daray dheeri ah iyo shaqaaleynno 1,9 milyan oo lagu daray 7 milyan oo lagu daray. Sanadkan, waxaan furi doonaa 5 aag oo warshado cusub abaabulan iyo 25 goobood oo warshadeed oo dheeri ah waxaanan fursado shaqo u abuuri doonnaa 2019 kun oo qof. Sanadka 7, waxaan dhameystirney kaabayaasha 12 qeybood oo warshado kaladuwan oo kala duwan oo ka kala tirsan gobalada dalkeena. Waxaan beegsanaynaa 45 kun oo shaqo oo dheeri ah iyadoo aan maalgashi cusub oo qiyaastii ah 62 bilyan oo TL ah ku leh XNUMX aag warshadeed oo aan ku dhawaaqnay instanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Mardin, Çanakkale, Trabzon, Adana iyo Ankara.
BARNAAMIJKA QARANKA QARANKA LAGU SAMEEYO
Waxaan ka bilaabeynaa maalgashiga qeybta koowaad ee shirkadaha gaarka loo leeyahay aag warshadeed ee Adana-Ceyhan Gaarka ah qeybta warshadaha qeybta hore ee sanadka 2020. Barnaamijka Caalamiga ah ee Baarayaasha Baarayaasha, waxaan wadankeena u keenay 98 cilmi baarayaal sare, oo 29 ka mid ah ay yihiin Turki iyo 127 ajaanib ah, wadankeena markii ugu horeysay. riyo labaatan sano in aan ku adkeeyey Agency Space Turkey ee December 2018. Barnaamijka Madasha Qaranka ayaa la shaaciyey qeybtii hore ee sanadkan.
17kii sano ee la soo dhaafay, waxaan hirgalinay 229 361 xarumood R & D iyo 5 xarumo naqshadeyn. Waxaan ku kordhinay tirada teknoolojiyadeenna 85 illaa 3. Mugla Teknokent iyo Sayniska Caafimaadka Teknokent ayaa shaqeynaya qeybtii koowaad ee sanadkan. Sanadkii la soo dhaafay, iyada oo loo marayo TUBITAK, 427 kun 700 R & D mashaariicda waaxda gaarka loo leeyahay, waxaan bixinnay deeqdo gaareysa 1 milyan oo gini. TEKNOFEST, oo ah kii labaad oo la abaabulay, ayaa noqday duuliyaha ugu weyn dunida, hawada iyo damaashaadka tikniyoolajiga ee 720 oo ay ku jiraan 2019 milyan XNUMX kun oo booqdeyaal ah. TEKNOFEST, xamaasadda tiknolojiyadda iyo hal-abuurka ku xeeran ummaddeenna oo dhan, ayaa lagu qabtaa Gaziantep sannadkan.
LABA DHEERAAD CUSUB EE TUBITAK
Waxaan ka aasaasnay ​​machadka sirdoonka Artificial Art-ka gudaheeda TÜBİTAK si aan u socodsiino xogteena weyn una u beddesho macluumaad iyo qiimo dhaqaale. Sannadkan waxa aan bilaabay baaritaanka nidaamka aqbalaada of Turkey ayaa madal sirdoonka signal macmal horeysay sirdoonka ku salaysan. Sanadkii 2019, waxaan gaarnay duulimaadkii seddexaad ee sayniska waxaanan aasaasnay ​​saldhigyadeena sayniska ee ku meelgaarka ah ee Antarctica waxaanan bilownay Machadka Cilmi baarista Polar. Ololaha afaraad ee Ololaha Sayniska ee Antarctic-ka ayaa la qaban doonaa qeybtiisa hore ee sanadkan.
Waad ku mahadsan tahay madaxa qarankeena
Xarunta Tareenka ee Malikoy oo ay saameysay qaddarka waddankeena
Madaxweyne Erdogan oo furay Alaaddin-Adliye Tram Line
Madaxweynaha Erdogan oo bilaabay "Alaaddin-Adliye Tram Line"
Madaxweyne Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Turkiga (Video)
Madaxweynaha Erdogan, BTK Railway si uu u furmo December
Madaxweyne Erdogan oo ku dhawaaqay 3.
Madaxweyne Erdogan oo loo yaqaan 'Tram (Video)'
Madaxweynaha Erdogan ayaa ka dhigaya kan ugu horreeya ee ka soo wareega masraxa Eurasia ee maanta
Safarka ugu horeeya ee baabuurta laga soo galo Madaxweynaha Talyaaniga Erdogan
Barnaamijka Hawada Qaranka
Machadka Sirdoonka Farshaxanka